VACGF 50006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၅၀၀၀
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၅၀၀၀
အ်ာတိုအဆင့် ၆ ဆင့်
စံ - ISO 9001:2015
အာမခံ- ၁၂ လ
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF5000
With this VACGF50006in 1 Automatic bottle filling machine of Viet An, you will need only one operator to guarantee the performance of7to 10 workers.
Viet An က ထုတ်တဲ့ VACGF 50006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုဖြည့်ပေးတဲ့ စက်ကို သုံးခြင်းဖြင့် အလုပ်သမား ၇ ယောက်ကနေ ၁၀ ယောက်အထိ လုပ်ဆောင်ရမည့် နေရာတွင် အော်ပရေတာ တစ်ခုသာ လိုတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Let’s learn more about VACGF5000 automatic bottle filling machine of advanced technology being supplied by Viet An in this artcile.
ဒီဆောင်းပါးမှာ Viet An က ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ VACGF5000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိအောင် လေ့လာကြရအောင်။
VACGF50006in 1 automatic bottle filling machine
VACGF50006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
Viet An General Trading Joint Stock Company has been equitized since Aug/2009.
With2factories and4representative offices in Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang, Buon Ma Thuot and overseas branches such as Laos, Cambodia, Thailand, etc., after nearly 20 years of construction and development, Viet An has affirmed its No. 1 position in Vietnam and the 4th position in Southeast Asia in the field of manufacturing, importing, distributing, and installing filling machines and water purification lines as well as manufacturing stainless steel ice machines.
Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang, Buon Ma Thuot တို့မှာ စက်ရုံနှစ်ခု ရုံးခွဲ ၄ ခုနဲ့ နိုင်ငံခြားရုံးခွဲတွေအဖြစ် လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ထိုင်းစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ နှစ် ၂၀ နီးပါး ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ တိုးတက်မှုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ Viet An ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ နံပါတယ် ၁ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဆိုရင်လည်း လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေ ရေသန့်ပေးတဲ့လိုင်းတွေ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတပ်ဆင်ပေးခြင်း၊ စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲစက်ထုတ်လုပ်ခြင်း စတဲ့နယ်ပယ်မှာ နံပါတ် ၄ ဖြစ်ပါတယ်။
We always focus on product quality, innovating and applying the latest technology to each product. We always say no to fake products and products of bad quality. That is the reason why the products provided by Viet An are always highly appreciated and trusted by the customers.
ကျွန်တော်တို့က ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲမှု နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ အသုံးချမှုတို့ကို အမြဲတမ်း အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအတုတွေနဲ့ အရည်အချင်း မပြည့်မီတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း ငြင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်က Viet An ကုမ္ပဏီကို ၀ယ်ယူသူတွေက အသိအမှတ်ပြုပြီး ယုံကြည်ကြတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
With such unceasing efforts to build an unique brand with high quality and customer trust, Viet An has been awarded many different awards and noble certificates by the State and been highly recommended by the consumers.
မြင့်မားတဲ့ အရည်အသွေး ၀ယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့အတူ မလျှော့သောဇွဲနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တစ်ခု တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် Viet An ကုမ္ပဏီဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ၀ယ်ယူသူတွေကပေးတဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေနဲ့ လက်မှတ်တွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Some cups that Viet An has been awarded ( Viet An မှ ဆွတ်ခူးခဲ့သော ဆုအချို့ )
This is the driving force for Viet An to try harder in the coming time.
ဒီဆုတံဆိပ်တွေက Viet An ကို နောက်ထပ်ပိုပြီးကြိုးစားအောင် တွန်းအားပေးနေပါတယ်။
Advantages of Viet An’s VACGF50006in 1 automatic filling machine
Viet An ၏ VACGF 50006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
Ownafilling machine meeting ISO 9001:2015 Standard
ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းမီတဲ့ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
Filling purified water, mineral water into the bottles with advanced machinery, replacing human labor is an inevitable trend today.
VACGF5000 applies the most modern technology of washing, filling, capping in the market currently. With6automatic steps integrated, the VACGF50006in 1 automatic filling line will help to increase productivity, and automate the production of bottled water
ရေသန့်တွေကို ရေဘူးထဲကို ဖြည့်တဲ့အခါ လူတွေအစား ခေတ်မီစက်တွေကို အသုံးပြုလာတာဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ ခေတ်စားလာပါတယ်။ VACGF 5000 စက်ကို ယနေ့ဈေးကွက်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး ဆေးကြောပေးခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းး နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ VACGF 5000 စက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေကာ ရေသန့် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
All components constituting the machine are genuine withalong shelf life. The production and assembly process is strictly monitored to meet ISO 9001: 2015 Standard. Certified Viet An exclusive brand No. 250969 at the National Office of Intellectual Property of Vietnam
ဒီစက်မှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးက စစ်မှန်ပြီး ကြာရှည်ခံပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ တပ်ဆင်မှုတွေကို ISO 9001:2015 စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ တင်းကြပ်စွာ လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ လက်မှတ်လည်း ရရှိထားပါတယ်။
Certified Viet An exclusive bran - ISO 9001:2015 Standard
တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားသော Viet An မူပိုင်ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်- ISO 9001:2015 စံသတ်မှတ်ချက်
filling machine supplied by Viet An
Viet An မှ ထုတ်လုပ်သော လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
First step: Air conveyor
ပထမအဆင့်-လေဖြင့် သယ်ယူပေးသော ကိရိယာ
Use AC2 air to put the bottles together
Transfer the bottles automatically
AC2 လေကို အသုံးပြုပြီး ဘူးတွေကို အတူတကွ ထားပေးပါတယ်
ဘူးတွေကို အော်တို ရွှေ့ပြောင်းပေးပါတယ်
2+3+4 steps: Automatic bottle washing, filling, capping
၂+၃+၄ အဆင့်များ-အော်တို ဘူးသန့်ရှင်းပေးခြင်း ဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် အဖုံးတပ်ပေးခြင်း
In the industry of water production, the issue of food safety and hygiene is always strictly required. A numerous production steps need to be ensured, including the washing step. Normally, the automatic bottle washing process often requires manpower. However, with an automatic washing part integrated into the VACGF5000 washing, filling and capping machine, the bottles will be thoroughly cleaned without any manpower required.
The bottle will be sent toaconveyor system that is connected to the washing machine system automatically or semi-automatically At this automatic washing machines, 14 plastic bottles are firmly kept with 14 clamping heads and put downwards to fit 14 washing heads. From the washing heads, the water will be sprayed into the bottles with strong pressure to clean them all.
The bottles, after being washed clean, are rotated 180 degrees by the clamps and sent to the filling machine through the gear conveyor system.
ဘူးတွေကို အော်တို ဆေးကြောပေးခြင်း
ရေသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှုက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တွေ အမြောက်အမြား အထူးသဖြင့် ဆေးကြောတဲ့ အဆင့်က သေချာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ဆေးကြောတဲ့ အဆင့်က လူအင်အားလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း VACGF 5000 မှာပါတဲ့ ဆေးကြောတဲ့စနစ်ကြောင့် လူအင်အားကို မလိုအပ်စေပါဘူး။ ဘူးကို အော်တို ဒါမှမဟုတ် တစ်ဝက်အော်တို လုပ်ဆောင်တဲ့ ဆေးကြောတဲ့ စက်ကို ဆက်ထားတဲ့ ရွေ့လျားစက်စနစ်ဆီကို ပို့ပေးပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ပလပ်စတစ်ဘူး ၁၄ ဘူးကို ညှပ် ၁၄ ခုနဲ့ သေချာညှပ်ထားပြီး ဆေးကြောပေးတဲ့ ခေါင်း ၁၄ ခုနဲ့ တည့်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ဆေးကြောပေးတဲ့ ခေါင်းတွေကနေ ရေတွေကို ဘူးအတွင်းထဲသို့ ဖိအားများများနဲ့ ဖြန်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကြောပြီးတဲ့ ပုလင်းတွေကို ညှပ်တွေက ၁၈၀ ဒီဂရီ လှည့်ပေးပြီး ဂီယာရွေ့လျားစက်စနစ်ကို ဖြတ်ပြီး ဖြည့်ပေးတဲ့ စက်ဆီကို ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
After being washed, pet bottles with the diameter of Φ55-Φ100 and height of 100-320mm will be sent to the filling system through the gear conveyor. At the filling heads, the pet bottles will be firmly kept mechanically. The water will be filled into the bottles according to the common quantitative methods
The high or low filling speed all depends on your programming before operation.
The maximum filling capacity of VACGF5000 filling machine is 5,000 500ml bottles per hour.
ဘူးတွေကို အော်တို လောင်းဖြည့်ခြင်း
ဆေးကြောပြီးတဲ့အခါ အချင်း ၅၅-၁၀၀ နဲ့ အမြင့် ၁၀၀-၃၂၀ မီလီ ဘူးတွေကို ဂီယာစနစ်ကို ဖြတ်ပြီး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ စနစ်ဆီ ပို့ပေးပါတယ်။ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်းတွေဆီမှာ ဘူးတွေကို သေချာကပ်ပေးပါတယ်။ ရေတွေကို အရေအတွက်နည်းအတိုင်း ရေဘူးတွေထဲကို ဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ အရှိန်အနှေးအမြန်က ပရိုဂရမ်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ VACGF 5000 စက်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက တစ်နာရီမှာ 500 ml ဘူး ၅၀၀၀ကို ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
The bottles fully filled with water will be transferred to the capping machine through the conveyor.. The capping part is connect to the cap loading system according to the feeding and capping mechanism. The caps will be sent to the capping machine respectively and fit at the bottles
Four bottles will be capped at one turn thanks to the4capping heads and then sent to the conveyor belt through the gear conveyor, from which they will be transfered to the labeling, shrinking, printing and wrapping parts.
The VACGF5000 3-in-1 automatic bottle washing, filling, capping machine can be used to fill3types of bottles, including 350ml, 500ml and 1,500 ml with the corresponding height ranging from 100 to 320mm.
This machine consumes about 2.24 kg of electricity per hour only.
လောင်းဖြည့်ပြီးတဲ့ ဘူးတွေကို ရွေ့လျားစက်ကို ဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးပါမယ်။ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ အပိုင်းကို အဖုံးသယ်ပေးတဲ့ စက်နဲ့ ဆက်ထားပါတယ်။ အဖုံးတွေကို အဖုံးသယ်ပေးတဲ့ စက်ဆီကို အသီးသီးပို့ပေးပြီး ဘူးတွေမှာ တပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်း ၄ ခု ပါတာကြောင့် တစ်ကြိမ်မှာ အဖုံး ၄ ခု ဖုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် ဂီယာရွေ့လျားစက်ကို ဖြတ်ပြီး ရွေ့လျားစက်ခါးပတ်ဆီကို ပို့ပေးပါမယ်။ အဲ့ဒီ့က တဆင့် လေဘယ်တပ်ပေးခြင်း၊ ရှုံ့ပေးခြင်း၊ ပရင့်ထုတ်ခြင်းနဲ့ ထုတ်ပိုးခြင်းအဆင့်တွေဆီ ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Typically, to fulfill the capacity of 5000 bottles per hour,aconsiderable number of manpower is required. Therefore, to modernize the production process, Viet An's VACGF5000 automatic bottle filling machine is equipped with an additional automatic bottle cap loading machine.
The machine is designed withamodern and sophisticated design. It includesacap tray,aconveyor motor system,aconveyor belt, an air blower system andasensor eye.
With this machine, the only task is to fill the cap tray with the caps. After that, these caps will be sent to the capping heads through the conveyor belt automatically and exactly. With this machine, the caps will never be upside down.
တကယ်တော့ တစ်နာရီမှာ ဘူး ၅၀၀၀ ကို ဖြည့်ဖို့ဆိုလျှင် လူသားလုပ်အားက လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ခေတ်မီစေဖို့အတွက် Viet An ရဲ့ VACGF 5000 စက်မှာ အဖုံးတွေကို အော်တိုသယ်ပေးတဲ့စက်ကို ထပ်မံတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီစက်ကို ခေတ်မီအောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အဖုံးထည့်တဲ့ ဗန်း၊ ရွေ့လျားစက်မော်တာ စနစ်၊ ရွေ့လျားစက်ခါးပတ်၊ လေမှုတ်စနစ်နဲ့ မျက်လုံးဆင်ဆာစနစ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီစက်မှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် တစ်ခုတည်းသောအရာက ဗန်းထဲမှာ အဖုံးတွေကို ထည့်ထားပေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာ အဖုံးတွေကို တိကျပြီးအော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ ရွေ့လျားစက်ခါးပတ်ကို ဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ပို့ပေးပါတယ်။ ဒီစက်နဲ့ဆိုရင် အဖုံးတွေ မပျက်စီးပါဘူး။
အဆင့် ၆ - မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးခြင်း
Usually, it is difficult for workers to visually inspect the anomaly under high intensity and foralong time. To solve this limitation, Viet An has invented to integrate this anomaly inspection machine into the VACGF5000 6-in-1 automatic bottle filling line.
ထုထည်သိပ်သည်းတဲ့ အောက်က မူမမှန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလုပ်သမားတွေက အချိန်အကြာကြီး ဆန်းစစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ Viet An မှ VACGF 5000 စက်မှာ မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ စက်ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Inspect anomaly inside the bottles.
How to use: Move the bottles through the inspection light. The light will detect anomaly for the operator sto reject the unqualified bottles.
ဘူးတွေထဲက မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးပါတယ်။
အသုံးပြုနည်း- ဘူးတွေကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ အလင်းရောင်ကို ဖြတ်ပြီး ရွှေ့ပေးပါ။ အလင်းရောင်က အရည်အသွေး မပြည့်မီတဲ့ အရာတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ စစ်ဆေးပေးပါမယ်။
Plastic conveyor (ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက်)
It is made from soft plastic with high durability. The shelf life can reach 15 years. This conveyor belt will be attached to the frame system to transfer the bottles from one part to another quickly, without any manpower required with space-saving.
ဒီစက်ကို ကြာရှည်ခံတဲ့ နူးညံ့တဲ့ ပလပ်စတစ်နဲ့ လုပ်ထားပါတယ်။ ၁၅ နှစ်ထိ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒီရွေ့လျားစက် ခါးပတ်က ရေဘူးတွေကို တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ ရွှေ့တဲ့အခါ လူလိုဘဲ မြန်မြန်ရွှေ့န်ိုင်အောင် ဖရိန်စနစ်နဲ့ တွဲထားပါတယ်။
With6built-in automatic steps, this VACGF5000 contributes to help the businesses satisfy food hygiene and safety standards. It also helps to save labor cost and increase competitiveness and reduce product price.
အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကြောင့် VACGF 5000 စက်က စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေကို သန့်ရှင်းပြီး လုံခြုံတဲ့ စံချိန်တွေနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။
Currently, Viet An is offering an extremely attractive price for this VACGF5000 machine with6automatic steps.
ယခုအခါမှာ Viet An က အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ပါတဲ့ VACGF 5000 စက်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
Besides the above6steps, you can consider to invest4additional steps to significantly reduce manpower and improve business performance.
အပေါ်က အဆင့် ၆ ဆင့် အပြင် သင့်လုပ်ငန်းပိုမိုကျယ်ပြန့်ဖို့ အောက်ကအခြားအဆင့် ၄ ဆင့်ကိုလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Other automatic steps can be integrated into the VACGF5000 filing machine.
VACGF 5000 စက်မှာ ထပ်ထည့်နိုင်တဲ့ အခြားအော်တိုအဆင့်များ
Below are some specific automatic steps that you can purchase separately (optional)
သီးခြားဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အဆင့်များကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁။VALS4000 ဘူးများကို တစ်ဝက်အော်တိုရွှေ့ပေးပြီး စီပေးသောစက်
This machine can replace 2-3 operators. The operators pour the empty bottles into the tray. After that, they mount the bottles onto the machine molds. Finally, they supply the bottles to the air conveyor.
VALS4000 ဘူးများကို တစ်ဝက်အော်တိုဖြည့်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
ဒီစက်ကို အော်ပရေတာ ၂-၃ ယောက်အစားထိုးနိုင်တယ်။ အော်ပရေတာတွေက ဘူးလွတ်တွေကို ဗန်းထဲထည့်ပေးရပါမယ်။ ထို့နောက် ဘူးတွေကို ပုံစံခွက်ထဲကို ပို့ပေးပါမယ်။ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့က ဘူးတွေကို လေရွေ့လျားစက်ထဲ ထည့်ပေးပါမယ်။
Technical specification of the bottle loading and arranging machine
VALS4000 ဘူးများကို တစ်ဝက်အော်တိုဖြည့်ပေးပြီး စီပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
2. Steam Membrane Shrinking Machine
၂။ ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
The machine consists of: Boiler and membrane shrinking machine
Application: Protect the bottles against dust and increase the aesthetics
ဒီစက်မှာ ရေနွေးအိုးနဲ့ အလွှာကို ရှုံ့ပေးတဲ့စက် ပါဝင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ပုံ-ရေနွေးငွေ့အပူကို သုံးပြီး ဘူးတွေပေါ်က ဖလင်တွေကို ရှုံ့ပေးပါတယ်။
အပလီကေးရှင်း-ဘူးတွေကို ဖုန်မတက်စေဘဲ လှပစေပါတယ်။
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 1000-4000
Weight (Kg) အလေးချိန် 120
၃။မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်
Designed to print on the pet bottles with ink jet technique. Up to3lines of text can be printed. Simple operation, easy to adjust inkjet printing speed, printing content. Less ink and solvent consumption. Stable performance, high capacity. Dirty ink can be automatically washed at the nozzles. No clogging phenomenon
Application: The expiry date is printed onto the pet bottles
ဘူးတွေအပေါ် နှိပ်ဖို့ မင်စက်နည်းပညာ သုံးထားပါတယ်။ လိုင်း ၃ ခုထက်ပိုပြီး ပရင့်ထုတ်လို့ ရပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်က ရိုးရှင်းပြီး အရှိန်နှုန်းကိုလည်း လွယ်ကူစွာ ထ်ိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ မင်လည်း မစားပါဘူး။ လုပ်ဆောင်မှုက တည်ငြိမ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်ပါတယ်။ ညစ်ပတ်နေတဲ့ မင်တွေကိုလည်း နှုတ်သီးမှာ အော်တို ဆေးကြောပေးပါတယ်။
အပလီကေးရှင်း-ဘူးတွေပေါ်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ပရင့်နှိပ်သည်။
မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
4. Semi-automatic log membrane shrinking machine:
Using this VAGS6000 semi-automatic log membrane shrinking machine will help to remarkably increase the productivity. The operators do not need to take too much effort. Wrap the bottles into different packs of 6, 12, 24 bottles per pack easily.
VAGS6000 တစ်ဝက်အလိုအလျောက် လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်ကို သုံးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးတက်လာစေပါတယ်။ အော်ပရေတာတွေက အရမ်းအားထုတ်စရာမလိုပါဘူး။ ၆၊ ၁၂၊ ၂၄ စသဖြင့် ဘူးတွေကို ပလပ်စတစ်နဲ့ အလွယ်တကူ ထုပ်ပိုးနိုင်တယ်။
တစ်ဝက်အလိုအလျောက် လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Technical specifications of VACGF50006in 1 automatic filling machine
VACGF50006in 1 ဘူးများကိုအော်တိုဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
It is required to carefully check and assure the machine hygiene before the filling process.It is required to carefully check and assure the machine hygiene before the filling process.
• Prepare enough bottles and caps.
• Check the switches.
• Check the water source
• Set up the filling mode, filling capacity
လောင်းဖြည့်ခြင်းမလုပ်ခင်မှာ စက်ရဲ့ သန့်ရှင်းမှုကို သေချာအောင် လုပ်ရပါမယ်
ဘူးနဲ့ အဖုံးတွေ လုံလောက်အောင် စီစဉ်ထားပါ
လောင်းဖြည့်တဲ့ အခြေအနေ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို တည်ဆောက်ပါ
Switch on the 3-phase power supply to start the machine
Open the water supply valve for the system to operate
Check the machine's operating parameters on the PLC screen
Supply the system with bottles
စက်ကို နှိုးဖို့ ပါဝါပေးပို့မှု ၃ ဆင့်ကို ဖွင့်ပါ
စစ်စတန်လုပ်ဆောင်ဖို့ ရေအရင်းအမြစ်အဆို့ကို ဖွင့်ပါ
PLC စခရင်ပေါ်က စက်ရဲ့ လည်ပတ်မှု ပါရာမီတာကို စစ်ပါ
စစ်စတန်ကို ဘူးတွေ ပေးပို့ပါ
စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
Requirements for the installation area
This machine is designed with6automatic steps withaconveyor system to connect with other parts. Thus, please refer to the instructions below to prepare the installation area properly if you intend to install VACGF5000 washing, filling, capping machine
In addition to this VACGF5000 6-in-1 automatic bottle filling machine, Viet An also supplyawide range of automatic bottle filling and capping machine with various capacity. If you haveafactory producing purified water, bottled water, and want to own an automatic bottling machine with these6steps, don’t hesitate to reach us now at 0949 414141
or directly visit us at our office in Hanoi: Phu Huu hamlet, Thanh Lam village, Me Linh dist, Hanoi, Vietnam.
ဒီ VACGF 5000 စက်ကို တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် နေရာအလုံအလောက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်ဖို့ ဧရိယာပြင်ဆင်ရန် အောက်က လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ပေးပါ။
VACGF 5000 စက်အပြင် Viet An ကုမ္ပဏီမှ အခြားသော စက်များဖြစ်တဲ့ ရေဘူးမှုတ်စက်၊ ရေသန့်စင်ပေးသော လိုင်းတွေလည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ : Phu Huu ကြေးရှာ၊ Thanh Lam Commune၊ Me Linh ခရိုငျ၊ ဟနှိုငျးမွို့၊ ဗီယကျနမျ
Technical specifications of VACGF 5000 automatic filling machine
VACGF 5000 ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
A. VACGF5000 FILLING MACHINE -6MUST -BUY ITEMS
VACGF 5000 လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ ၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်
Washing head ဆေးကြောပေးသောခေါင်း 14
Filling head ဖြည့်ပေးသောခေါင်း 12
Capping head အဖုံးတပ်ပေးသောခေါင်း 4
Machine capacity (350ml bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 3,500- 5,000
Machine capacity (500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 3,500- 5,000
Machine capacity (1,500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 1,500-2,000
Weight အလေးချိန် 2000
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF50006IN 1 FILLING MACHINE
VACGF 50006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
2. VAS4000 Steam Membrane Shrinking Machine
VAS4000 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
4. VAGS6000 Semi-auto film wrapping machine
Hỏi đáp & đánh giá VACGF 50006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်